Tsy afaka miady amin’ny COVID-19 ny sakafo japoney mahery, saingy mety hanalava ny andro iainanao · Global Voices teny Malagasy
Faran'ny Aprily, lasa 'fanafody' sandoka ho an'ny COVID-19 ny natto.
Voadika ny 11 Janoary 2021 19:11 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Français, Ελληνικά, Español, عربي, 日本語, polski, বাংলা, Português, Filipino, English
“納豆ごはん” (Natto ambony vary) nalain'ny mpiampiasa Flickr Masafumi Iwai, CC BY-NC 2.0
Topazo maso ny tatitra manokana nataon'ny Global Voices momba ny fiantraikan'ny COVID-19 manerantany.
Ny natto, oharina amin'ny foromazy indraindray, dia sakafo japoney nentim-paharazana vita avy amin'ny fanotrehana soja sy ny fampitomboana bacillus subtilis, na nattokin. Ankafizina noho ny tsiron'ny umami heno be ao aminy ny natto, izay foto-tsakafo malaza sady mora any amin'ny faritra maro ao Japana, ary hanina miaraka amin'ny vary na toast, anaty sushi, anaty spaghetti, na mandeha irery, afangaro aminà moutarde karashi mamay sy saosy ponzu citrus.
Tany amin'ny antsasaky ny volana Martsa tany, nahita ny Nexer, orinasa fikarohana momba ny mpanjifa ao Japana, fa saika ny 40 isan-jaton'ireo Japoney nanaovany fanadihadiana no nampiditra sakafo hafa fanampiny tanatin'ny fihinany isanandro mba “hanamafisana ny hery fiarovany” (免疫力を高める). Raha toa ka sakafo nalaza tanatin'ireo fanadihadiana ny tongologasy sy ny sakamalao, ireo sakafo naotrika toy ny yaourt sy ny natto kosa no teo amin'ny lohalaharana.
Mbola tamin'ny Martsa ihany, niparitaka ny tsaho tao amin'ny tambajotra sôsialy fa misoroka amin'ny COVID-19 ny natto. Ny tena antony niparitahan'ireo tsaho ireo dia satria somary ambany ihany ny tahan'ny voan'ny COVID-19 tany amin'ireo fileovana mifandray amin'ny tantaran'ny natto, toa an'i Ibaraki sy Iwate. Raha nanomboka nanao vatsy natto ireo mpiantsena, namoaka taratasy kosa ny Masoivoho misahana ny Raharahan'ny Mpanjifa ao Japana, nandrava ilay fiheverana fa mety hiaro amin'ny COVID-19 io sakafo io.
Tany amin'ny faran'ny volana Aprily, mbola tsy ampy ihany ny natto tao Japana, ary nanomboka noraisin'ny haino aman-jery ho iray amin'ireo sakafo sandoka “enti-mitsabo” ny COVID-19 fotsiny ihany izy io, miaraka amin'ireo hafa ahitàna ny seirogan (正露丸), dite mainty, tongologasy, sy cocaine.
Kanefa, na dia tena tsy miaro amin'ny COVID-19 aza ny natto, dia mety mifandray amin'ny fitomboan'ny halavan'ny andro iainana io “sakafo mahery” naotrika io, raha ny tatitr'ireo fikarohana farany tao Japana. Tanatinà fikarohana iray izay nanaraha-maso ny fahazarana ara-tsakafo sy ny vokany teo amin'ny fahasalaman'olona 29.000 teo tao amin'ny tanandehiben'i Takayama teo anelanelan'ny taona 1992 ka hatramin'ny 2008, dia hita tamin'ireo mpandray anjara izay nihinana natto iray fonosana fara-faharatsiny indray isan-kerinandro fa nihena 25 % ny risika mety hahafaty azy ireo noho ny aretin'ny fo raha oharina amin'ireo izay mahalana vao mba nihinana izany.
Nisy fikarohana iray hafa naharitra 15 taona nataon'ny Ivotoeram-pirenena Japoney ho an'ny Homamiadana taminà olona 90.000 efa lazondazony sy efa nahazo taona nahitàna fa ny fihinanana sakafo vita amin'ny soja naotrika, indrindra ny natto, dia nampifandraisina tamin'ny — raha tsy hoe nifandray mivantana tamin'ny — risika ambany kokoa amin'ny fahafatesana noho ny aretin'ny fo sy ny homamiadana.
Raha toa ka tsy voaporofo ny fifandraisana misy eo amin'ny fihinanana natto sy ny fitomboan'ny andro iainana, misy teôria iray kosa milaza fa naseho ho mandevona ny rà mivaingana ary mety hanampy hanalefaka ny aretin'ny fo ny nattokinase, enzyme iray hita anatin'ireo kofehy miraikidraikitry ny natto.
“Izaho koa tsy mba liana tamin'ny natto, tany am-boalohany,” hoy ny mpanao gazety, mpanoratra ary mpaka sary John Ashburne, tanatinà resadresaka nifanaovana tamin'ny Global Voices. “Tamin'i Sasha (chef mpanao sakafo sady vadin'i Ashburne) nikarakara azy niaraka tamin'ny atody papelika manta sy tongolo maitso voatetika – izay samy nampiasaina mba hampihena ilay fofona mahery – no nanombohako nankafy azy io.”
Mpanoratra fanta-daza momba ny sakafo japoney izay nanoratra boky torolàlana ho an'ny Lonely Planet momba io lohahevitra io i Ashburne, mponina efa ela tao Kyoto sady mpamboly holatra no mpiremby araka ny famaritany ny tenany.
Milaza i Ashburne fa tiany ny manovaova ny tsaramaso ampiasainy, sy ny fomba fikarakarany azy, indraindray masahany amin'ny etona, indraindray ampangotrahiny, na koa karakarainy amin'ny afo malefaka miaraka amin'ny konbu, fa matetika tsy asiany.
Amin'ny alàlan'ny fomba fahandro iray mampiasa hafanana ambany, azo atao ao anaty lafaoro ny natto amin'ny fampiasana bocal fitaratra voadio na koa fitoerana plastika. Ny fomba mora indrindra fanaovana natto dia ny fampiasana ny Instant Pot na ny cocotte-minute. Fanamby lehibe iray ny fitadiavana spôra fanombohana natto, izay misy ny nattokin ilaina amin'ny fanotrehana. Misy hitsin-dàlana iray dia ny fampiasana natto anaty fonosana ho toy ny akora fanombohana raha betsaka kokoa ny indray atao.